Ndezvipi zvingangondibatsira zvakanakisisa neDoFollow backlinks?
Kutsvaga mawebhusayithi kana mablogi zvingave zvakanakisisa kuDoFollow backlinks, iwe ungangodaro uchifunga nezvebloging commenting, mushanyi kutumira, kutumira mabhuku uye mabhizinesi, nekudaro. Zvechokwadi, unogona kuwana dzimwe sarudzo dzakanakisisa dzehupamhi hwekugadzirisa kusimba kunze uko. Asi chinangwa ndechokuti, pane pane zvakakosha zvinogadzirisa izvo zvingava zvakanakisisa zvekuti DoFollow backlinks kunyanya here? Ndine dzimwe nzvimbo nzvimbo dzako - box truck values commercial.
Asi usati watarisa mumwe nomumwe wavo, ngatitangei nekukurukura zvishoma. Pashure pezvose, sei uchifanira kuva nazvo pawebsite yako kana blog? Kuita zvakanakisisa kuti uwane DoFollow backlinks, rudzii rwemhando yatinogona kutarisira kubva kwavari?
Mazano Akanakisisa eDoFollow Backlinks
yakanyanya kutsvaga Tsvakurudzo inotungamirirwa zvakananga pawebsite yako kana ma blog;
yakasimba Domain Authority inopa kukurudzira kusingaperi kumabasa ako epurogiramu;
kukwidziridza AdSense yako CPC (iyo inodhura nechomwechete);
kukurudzira kufambira mberi kwako mberi neGoogle PageRank;
kuvandudza yako yazvino yekutsvaga Engine Engine Rank uye kuratidza kuti iwe unowedzera kukurudzira.
Pane inenge gumi nemaviri ezvinyorwa zvinotaridzirwa nzvimbo dzinotarisirwa kukukodzera iwe zvakanakisisa zveDoFollow backlinks. Pakati pevamwe, ndinoda kurondedzera zvinyorwa zvepaIndaneti zvinotevera sekuda kuti nzvimbo dzakanaka dzekutora chikwata chekuvaka chibatanidza nehuwandu hweDoFollow. Pasi apa ndotanga neGoogle Plus, YouTube, LinkedIn, kuti ndipedze neBlogger dot com. Saka, ngatiburukirei panyaya iyi!
Kuva rimwe remabhuku anonyanya kufarira paMedia Media, Google Plus inofanirawo kuzivikanwa senzvimbo yakanaka yevanhu kuti inakire kukurudzira kwakanaka nokuda kwewebsite yako kana blog. Nditendei kana kwete, asi pane zvimwe zvikonzero, basa iri rinoshandiswa nekutsvaga kwenyika guru rinowanzoonekwa risingafungi nevakawanda vema webmaster uye vadzidzisi vemaiti. Kunyange zvakadaro, ndinokurudzira kuedza kero yako yega yega kunze-kunakidzwa neDoFollow backlinks ine simba guru mumaminitsi.
Izvi zvinonyanya kuzivikanwa zvekugadzira mavhidhiyo zvinogona kushandiswa kuwana zvimwe zvekudzokera shure - kungoita gwara rako pachako nekuzadza "nezve" chikamu. Kuita nenzira iyi, zvisinei, iwe unogona kunge usina NoFollow backlinks chete. Kuti uwane backlink yakakosha zvikuru neDoFollow, iwe uchafanira kutarisa zvakashandiswa pakushanyira. Nenzira iyo, chengeta pa "webhusaiti yakabatanidzwa" uye uise peji URL yewebsite yako. Cherechedza, kuita kuti mano acho aite zvakanaka, iwe uchafanirwa kupedza nzira yekuongorora muGoogle Webmaster Tools yako kutanga.
Haisi nzvimbo yakanaka chete yekuumba ruzivo rwakakura rwehutano nehutano hwebhizimisi, asi mukana wakaisvonaka wekuva nepamusoro masimba ekudzokera kumashure - uye anogona kuratidzwa vanoshandisa vanofarira kubva kumativi ose enyika. Uye iwe hausi kuda kuharashikirwa, zvakarurama? Kugadzira imwe backlink pamwe neDoFollow maitiro pa LinkedIn - kungoita purogiramu yako pachako, shandisa maminetsi maviri kuti uzadze zvikamu zvakakodzera, uye ugoverei chikwata kune muenzaniso we blog yako, kuongorora kwezvigadzirwa, nezvimwe.Nenzira iyo, zvichida chero humwe hukama hunobatanidzwa huchava hunokosha. Zvinoshamisa, eh?
Iri guratifomu rekubhuraga harisi iro rakakurumbira, asi ndinonyatsomiririra kuti uone zviri pasi pemamiriro ose. Heuno maitiro aunogona kuwana backlink neDoFollow kunze uko - kungotanga bhurocha rako rekusimbisa blog paBlogger dot com, uye ubhadhara nguva yekuizadza nehuwandu hwemhanzi. Gadzirai webhusaiti yako huru webhusaiti kana blog - uye wapedza!